Home Wararka Eng.Yarisow oo ku amray Muse Suudi Yalaxow in uu ka guuro Xarunta...
Eng.Yarisow oo ku amray Muse Suudi Yalaxow in uu ka guuro Xarunta Marina (Daawo)
Ra’iisal Wasaare Kheyr Xassan Kheyre ayaa waxa uu ku amray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Eng Yarisow in uu si deg deg ah uga saaro dadka ku jira dhulkii ciidamadii Badda Soomaaliya iyo gurigii taliyaha ciidamada Badda ee degmada C/casiis ee gobolka Banaadir.
Eng Yariisow oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa aqriyay wareegto kasoo baxday xafiiskiisa, oo lagu amrayo dhamaan dadka degen dhismaha xaruntii ciidamada Badda Soomaaliya. Yarisow ayaa amar ku bixiyay in Muuse Suudi uu k baxo dhulka uu ka degan yahay Ciidanka Badda.
Sidoo kale wuxuu sheegay inuu ku amrayo dhamaan dadka degen inay sida ugu dhaqsiyaha badan kaga baxaan dhismahaasi, isaga oo sheegay in loo badalay dhul Diblumaasiyadeed, maadaama uu ahaa dhul dan guud ah.
Halkaan ka daawo wareegtada uu aqriyay: